Ukubuyiswa kweNtengiso yehotele: Jonga eJamani, eSpain naseGrisi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » Ukubuyiswa kweNtengiso yehotele: Jonga eJamani, eSpain naseGrisi
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zaseGrisi zokuPhula • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Amaxabiso eehotele ahlala engatshintshanga ngexesha leengxaki ze-COVID-19, kwaye iingcali zeshishini zilindele ukubuyela kwimeko yentengiso yamazwe aphesheya nge2024.
Uninzi lwabaqhubi beehotele abathe baphinda-thethana ngemiqathango yokuqeshisa, ilahleko enkulu ithintelwe kwiimarike ezininzi.
Uvavanyo oluqhutywe nguTranio lukhanyisa kuphuhliso lwecandelo.
Nge-Agasti 2021, Tranio uzimanye noMbutho woTyalo-mali kwiihotele zamanye amazwe (IHIIF) ukwenza uphando ngokudibeneyo kwimpembelelo ubhubhane we-COVID-19 ubenayo kwicandelo lokwamkela iindwendwe ukusukela nge-Matshi 2020, kunye nokufikelela kwinto esinokuyilindela kwintengiso ukuya phambili.
Olu phando lubonise ngaphezulu kweengcali ezili-160 zeshishini ezivela kwiYurophu iphela ngemibuzo ejolise ekudaleni ukuqonda okunqwenelekayo, iimvakalelo kunye nezinye izinto ezixhasa utyalomali lwezindlu nomhlaba okoko zaqala ubhubhane.
Uninzi lwabathathi-nxaxheba kuvavanyo (iipesenti ezingama-59) yayingabathengisi bezindlu okanye iingcali, i-16% yayingabaqhubi beehotele, i-13% yazichaza njengabatyali mali. Udidi 'lwabanye' (iipesenti ezili-12) lwaluquka abanye abaqeqeshi bemizi-mveliso, abanjengabacebisi botyalo mali, oonjingalwazi baseyunivesithi kunye neentatheli.
Olu phando luveze ukuba uninzi lweengcali zilindele ukuba ishishini lokubuka iindwendwe libuye kwakhona kwiminyaka emithathu ezayo, nangona imeko kwamanye amazwe ixhomekeke kumanqanaba okugonya. Abaphenduli ubukhulu becala baziva ukuba iimarike zaseJamani, iSpanish kunye neGrisi ziya kungqina ngakumbi kunabanye ngokubuyela kwimeko yesiqhelo. Ukongeza, i-nuances kwiimpendulo zabaphenduli zikhanyisa kwingxowa exubeneyo yeembono ezikhoyo ngoku kwimarike.
Kwi IUnited States 21 kuma-25 Iimarike zehotele zikwimeko yokwehla kwamandla emali.
Ama-52% akholelwa ukuba intengiso yehotele iya kuphinda ibekho ngo-2024
Uninzi lwabaphenduliyo luvakalise inkolelo yokuba imarike yokubuk 'iindwendwe iza kuphinda ibuyele kumgangatho wangaphambi kwengxaki kwisithuba seminyaka emithathu. Ngaphezulu kwesiqingatha - 52% sabathathi-nxaxheba baqikelela ukubuyela esiqhelweni ngo-2024, ngelixa abanye abangama-32% benethemba lokuba izinto ziya kubuyela kumanqanaba angaphambi kobhubhane ngo-2023.
Ngaphantsi kwe-7% balindele ukuchacha ngokupheleleyo ngo-2022. Omnye wabaphenduli, u-Alexander Schneider ovela e-Nikki Beach Hotels and Resorts, ulindele ukuba intengiso yolonwabo ibe nomnye weminyaka eyomeleleyo ngo-2022. Kodwa abanye balumke ngakumbi kwingqikelelo yabo. Omnye ophendulileyo ongakhange axele igama lakhe ukhethe ukuba iihotele ezikwicandelo lezokhenketho ziya kuphinda zibuye xa amaxabiso enyuka kwaye neemodeli zokusebenza zitshintsha.
Ngokuqaphelekayo, abaqhubi behotele babonakala ngathi banethemba elikhulu: iipesenti ezingama-44 zahlulwa phakathi kokulindelweyo kokubuyiselwa ngokupheleleyo ngo-2023 okanye ngo-2024, ngelixa iipesenti ezi-6 zikhethe unyaka wama-2022 njengonyaka xa izinto zibuyela esiqhelweni. Abatyalomali, kwelinye icala, babelumke ngakumbi. Uninzi lwabatyali mali (iipesenti ezingama-87) lindele ukubuyela kwimeko yesiqhelo kule minyaka mithathu izayo kwaye akukho mntu ukholelwa ukuba inokwenzeka ngo-2022.
Phakathi kwearhente yokuthengiswa kwezindlu kunye nokwamkela iindwendwe, iipesenti ezingama-51 zilindele ukuba imakethi iphinde ibuye kwakhona ngo-2024, ngelixa ama-35% akholelwa ukuba kuyakwenzeka kamsinya, ngo-2023. Malunga ne-5% balindele ukuba imakethi ibuyele esiqhelweni ngo-2022, ngelixa enye i-5% icinga njalo. izakwenzeka phakathi ko-2026 no-2030.
Nangona uninzi lwabatyali mali bengalindelanga ukuba bachache ngokukhawuleza, uninzi lwabo lunethemba malunga necandelo lehotele kule minyaka izayo- imeko leyo ikwabonakaliswa ngokucacileyo yi-Hospitality Insights umbiko Kwikota yesibini ka-2021. Ingxelo-mali ithi, i-85% yabatyali-mali, ibonakalise imeko yotyalo-mali oluqinisekileyo kumzi-mveliso wehotele, ngelixa i-13% ibingathathi cala kwaye yi-2% kuphela ebengenathemba. Ukwamkelwa kwezibhedlele kubeka iliso kumthengi nakumthengisi kwicandelo lehotele oko kwaqala ubhubhane. Iihotele zibambe phezulu kuluhlu kwikota yesithathu ngokulandelelana njengelona thuba lilungileyo lotyalo-mali kwezi nyanga zili-12 zizayo, zilandelwa ziiflethi ezinikwa iinkonzo kunye neendawo ekuchithelwa kuzo iiholide.
Iingcali zikholelwa ukuba iJamani neSpain ziya kubona ukukhawuleza okukhawulezayo kwishishini lehotele
Ngaphezulu kwesithathu (iipesenti ezingama-35) zabaphenduli bakholelwa ukuba intengiso yaseJamani iyakubuyisa umva ngokukhawuleza kunabanye. Abanye abangama-30% bakholelwa ukuba intengiso yaseSpain iya kuphinda ikhawuleze ibuye.
Phakathi kwabaqhubi behotele, i-31% ikhethe iJamani, kwaye i-25% nganye yalatha eGrisi, e-Itali naseSpain. Ngaphezulu kwekota, iipesenti ezingama-27 zearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba okanye yeengcali zokungenisa iindwendwe zicinga ukuba iGrisi iya kuba yeyona ikhawulezayo ukubuyisa kodwa uninzi lusavotele iJamani neSpain.
Ngaphezulu kwesibini kwisithathu sabatyalomali- iipesenti ezingama-69-bavakalise ukuzithemba kwintengiso yase-UK, ngelixa abanye babhekisa eJamani naseGrisi. Ngokwengxelo yamva nje ye-STR, icandelo lase-UK lokwamkela iindwendwe libonisa elona zinga liphezulu lokubuyisela eYurophu, eliqhutywa ziihotele zokuzonwabisa.
Abanye babo baphendulayo, abakhethe "abanye," abakhankanywe kumagqabantshintshi e-United States, e-Asia ngokubanzi, nase-Turkey nase China ngokukodwa. I-Kirk Pankey, uMongameli kunye noMlawuli oMkhulu kwisibhedlele saseLagundi, bakhethe ukuba awona mazwe agonyelweyo aya kuba nokufumana ngokukhawuleza kweemarike.
Amaxabiso ehotele ubukhulu becala ahlala engatshintshanga
Amaxabiso okuthengwa kweehotele ahlala engatshintshanga okanye ehle nge-5% okanye ngaphantsi, ngokwesininzi esikhulu (78.6%) sabaphenduli bethu.
Ngokumalunga notshintsho lwamaxabiso, izimvo zamaqela kuvavanywa ziyahluka. Abaqhubi beehotele babeneqela elingenathemba, nge-44% kuphela ebonisa ukuba amaxabiso awatshintshanga okanye ehle nge-5%. Okwangoku, i-38% yabaqhubi bakholelwa ukuba amaxabiso ehle ngaphezulu kwe-15% okanye i-20%. Kwangelo xesha, iipesenti ezingama-85 zearhente yokuthengiswa kwezindlu kunye nezihambi kunye neepesenti ezingama-81 zabatyali mali banoluvo lokuba amaxabiso awatshintshanga okanye awe nge-5%.
Idatha yobungakanani efunyenwe kuvoto ixhaswe liqabane likaTranio elilawulayo uGeorge Kachmazov, oqinisekisile ukuba akunakwenzeka okwangoku ukuthenga iipropathi zehotele esemgangathweni kwiindawo ezilungileyo ngamaxabiso asezantsi, ngaphandle kwengxaki eqhubekayo kwimarike.
“Baninzi abaqhubi abachaphazela amaxabiso: Ubutyala kwimarike abukho kwiitshathi ngokubanzi, njengesiphumo somgaqo-lawulo wemali. Iibhanki, okt abanini bemali-mboleko ekhuselwe ziipropathi zehotele, banyanisekile kubanini-mhlaba. Bahlala benqanda ekuthatheni isibambiso, ngelixa bekwabonelela ngokuchaswa kwemali-mboleko. Ngokubanzi, ukuze uthenge ipropathi yehotele namhlanje ngesaphulelo esomeleleyo (kunye nesivuno sophuhliso lwe-6% okanye ngaphezulu), umntu kufuneka ajonge iiprojekthi kwiindawo ezingalunganga, hayi kubungakanani beziko okanye ngokufuna ukulungiswa. Kwakhona iipropathi ezinesabelo esibalulekileyo semali ye-MICE ngoku zinokuthengwa ngesaphulelo esingaphezulu kwe-10-20% kwixabiso lokuthengisa kwangaphambili. Kwiipropathi ezinkulu kwiindawo eziphezulu zikwimeko entle, esona saphulelo siphezulu umntu anokukufumana kweli xesha yi-5-7%, ngokokuqikelela kwethu, ”utshilo uKachmazov.
Abanye abaphenduli bachaze ukuba kukho umsantsa omkhulu wokubuza ixabiso kumaxabiso ehotele. “Ukulunyulwa kwabaniniyo kuyo yonke inkxaso karhulumente kuya kudala ulungelelwaniso lwemali kunye neentlungu eziza kubakho kweli candelo. Imakethi yentengiselwano isekwimeko yoopopayi, ”utshilo omnye wabatyali mali.
Uninzi lwabaqhubi beehotele abavotelweyo bathi baphinde baxoxa ngemiqathango yokuqeshisa
Olu phando lutyhila nendlela abaqhubi-misebenzi abasabele ngayo kulo bhubhane. Uninzi lwabo bathathe inxaxheba kuvavanyo (70%) lubonise ukuba abaqhubi baphinde baxoxa ngemiqathango yokurenta. Abaqhubi ngokwabo bakhethe olu khetho malunga ne-59% yamatyala, ngokweempendulo zethu. Kubatyalomali, elo nani lalingama-63% kwaye kubaqeqeshi bezindlu, yayingama-74%.
Iziphumo zempendulo 'Khange uhlawule irenti' zahlukile phantse ngento ezimbini: abaqhubi ngokwabo bakhethe le mpendulo kwi-13% kuphela yamatyala, ngelixa abatyali zimali kunye neengcali zezindlu bezinika le mpendulo kwi-26% nakwi-25% yamatyala, ngokwahlukeneyo .
Izisombululo ezithandwayo zabaqhubi ngexesha lobhubhane ziye zatshintshela kwizivumelwano ze-hybrid kunye nezivumelwano zolawulo nabanini, nge-34% kunye ne-9% yabo bonke abaphendulayo abanika ezi mpendulo, ngokulandelelana. Kwangelo xesha, abaqhubi ngokwabo bakhethe olu khetho kwi-18% kuphela (tshintshela kwizivumelwano ze-hybrid) kunye ne-5% (isivumelwano sesivumelwano) samatyala.
Iihotele ezininzi zitshintshele kwixesha eliphakathi kunye nelide lokuqeshisa ngexesha lobhubhane
Phantse isiqingatha, okanye iipesenti ezingama-41, zabaphenduli bakholelwa ukuba uninzi lweehotele ziye zathanda ukuqeshisa phakathi kunye nexesha elide ngexesha lobhubhane. Ukongeza, iipesenti ezingama-32 zikholelwa ukuba uninzi lweehotele ziye zaguqulwa zaba yindawo yokusebenzela, kunye ne-17%, ukuba bavula iikhitshi zomoya okanye iivenkile ezimnyama.
"Olona tshintsho lukhulu luphume kulo bhubhani kukukhula kwendawo yokuhlala ixesha elide kunye namatyathanga amakhulu enza iminikelo yabo ukulungiselela iindwendwe zexesha elide," utshilo omnye wabathathi-nxaxheba.
Yi-10.2% kuphela evavanye ukuba uninzi lweehotele ziye zaguqulwa zenziwa amakhaya abantu abadla umhlala-phantsi, ngaphandle kwemfuno ekhulayo yakutshanje yezindlu eziphezulu. Ngokweengcali zeTranio, ukuguqula iihotele zibe ngamakhaya abantu abadla umhlala-phantsi kunqabile ukuba kwenzeke ngenxa yeemfuno zobuchwephesha ezahlukeneyo okanye iindawo ezingafanelekanga.
Ezinye zearhente yokuthengiswa kwezindlu kunye nokwamkela iindwendwe phakathi kwabaphenduli bethu zichaze ukuba iihotele zitshintshele kwiindawo zokuhlala ezingenamakhaya, zibonelela ngendawo yokuhlala yabasebenzi bokhathalelo lwempilo okanye amaziko ovavanyo e-COVID. "Iihotele ezininzi zihlala zivaliwe, kwaye zimbalwa ezibonelela ngeenkonzo zoluntu," utshilo uJoan E. Capella, uMlawuli we-M & A we-Iberolat Consulting & Investment.
Ukuphuculwa kwamazinga okugonya kuya kuqhuba ukubuyiselwa kweemarike zehotele
Xa bebuzwa ukuba bacinga ntoni ukuba kuya kuqhuba ukubuyela emva kwendyikityha yokufa, abaphenduli baphinde babhekisa kumanqanaba okugonya. Nangona zininzi iimpendulo ezinokubakho kulo mbuzo, iipesenti ezingama-71 zabaphendulayo bathi amaqondo okugonya ayakuba yeyona nto ibalulekileyo. Ukuvuselelwa kokhenketho lwamazwe aphesheya kunye noqoqosho lwehlabathi zezona mpendulo zilandelayo zidumileyo, zenza i-58% kunye ne-46% ngokwahlukeneyo. Ukongeza, iipesenti ezingama-23 zikholelwa ukuba intengiso yehotele izakufumana amandla okuvuselelwa kwemiboniso kunye neminyhadala yeshishini. Enye yeengcali ichaze ukuba ukhenketho kwishishini luza kuphinda lubuyele "nje xa imiqathango yohambo isusiwe kwaye ukuba inani labantu abagonyiweyo lingaphezulu kwama-80%."
Omnye wabaphenduli ukhankanye iteknoloji engenakuchukunyiswa kunye ne-AI njengezixhobo ezinokuthi ziguqule 'ukhenketho kunye nokubuk' iindwendwe kwempahla '.
Abanye abathathi-nxaxheba bachaze ukuba inkxaso karhulumente, ngakumbi eIreland naseSlovenia, ilincedile icandelo lokwamkela iindwendwe lisinde kumaxesha anzima. Ummeli wearhente yokuthengiswa kwezindlu eSlovenia u-Investmond wakhankanya ukuba eSlovenia abemi bafumana amakhuphoni ombuso avumela iihotele zalapha ukuba zizalise iipesenti eziyi-100. "Imarike yokuthengiswa kwezindlu eSlovenia yabona ukunyuka kwamaxabiso nge40% ukusukela ngoJanuwari ukuya kuAgasti 2021," bagqabaza.
"Ngokoluvo lwam, ukongeza ekubuyiseleni uqoqosho ngokubanzi, ukwanda kokhenketho kuzwelonke kumazwe abo kuya kuba negalelo ekuvuseleleni ngokukhawuleza imakethi yehotele ukusuka ngo-2022," utshilo uDetlef Lauterbach ovela eDELA.
Nathi eTranoo sinethemba lokuphinda ubuye ishishini lehotele kwaye sikhangele ithuba lokuthenga iihotele ezincinci ezifuna ukulungiswa ngesaphulelo kwaye sizilungiselele ixesha lokufumana kwakhona kwintengiso - ukulungisa, ukwandisa nokwenza iinkonzo zedijithali.